Galmudug oo shaki gelisay ka qeyb galkeeda shirka Muqdisho | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Galmudug oo shaki gelisay ka qeyb galkeeda shirka Muqdisho
Galmudug oo shaki gelisay ka qeyb galkeeda shirka Muqdisho
Maamulka Galmudug ayaa cabasho xoogan ka keenay rag ay ku sheegeen qaswadayaal oo ku soo qulqulaya Magaalada Cadaado, kana wada olole ka dhan ah maamulka uu hoggaamiyo Madaxweyne Axmed Ducaale Geelle (Xaaf).
Galmudug, ayaa War Saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay xubnahan oo sheeganaya in ay ka socdaan dhinaca Xukuumadda Soomaaliya, ay adeegsanayaan dhaqaale, iyagoona xoojiyay ololahooda, ka dib markii Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya, Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) uu Madaxda Galmudug ku marti qaaday shirka maalinta Sabtida lagu wado in uu Magaalada Muqdisho ka furmo.
Galmudug waxay muujisay haddii ay caqabadani sii socoto in ay adkaan doonto in Madaxweyne Xaaf uu galaangal u yeesho ka qaybgalka shirka Magaalada Muqdisho.
War saxaafadeedka ka soo baxay maamulka Galmudug ayaa waxaa warbaahinta u aqriyay Wasiirka Warfaafinta maamulkaas Maxamed Cusmaan (Masagawaa).
War Saxaafadeedka Galmudug, ayaa u qornaa sidatan:-
UJEEDDO: Dhibaatada ay xubno qaswadayaal ah ku hayaan Galmudug.